GM မှမြန်မာဈေးကွက်သို့ ဝင်ရောက်မည် | CarsDB
GM မှမြန်မာဈေးကွက်သို့ ဝင်ရောက်မည်
အမေရိကန်နိုင်ငံမှ General Motors သည်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဈေးကွက်ထဲသို့ ဝင်ရောက်ရန် ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်သည်ဟု သိရပါသည်။ General Motors သည် Pacific Alpine Pte. Ltd., နှင့်ပူးပေါင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် Chevrolet ကားများ ဖြန့်ချီရောင်းချခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းသည့် ဝန်ဆောင်မှုများပေးမည်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတဝန်းရှိ GM ၏ကားထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံများမှ ထုတ်လုပ်သည့် ကားများအနက် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကိုက်ညီမည့် ကားများအမျိုးအစားများကို တင်သွင်းရောင်းချသွားမည်ဟုသိရသည်။
ယခုအချိန်ဟာ အချိန်ကောင်းပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့မှာ အင်မတန် ကောင်းမွန်တဲ့ ကားအမျိုးအစား အများကြီးရှိပါတယ်။ လုပ်ငန်းသုံး Truck ကားတွေ၊ SUV တွေကစလို့ ဖက်ရှင်ကျတဲ့ ကားအလှတွေအထိ အကုန်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Chevrolet မှ အဆင့်အတန်းမြင့် ကွာလတီကောင်းတဲ့ ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမှတ်တံဆိပ်နာမည်ကို ခိုင်မာအောင် တည်ဆောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟု GM Southeast Asia Operations မှ President ဖြစ်သူ Martin Apfel မှပြောကြားခဲ့ပါသည်။
GM နှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်းမည့် Pacific Alpine Pte. Ltd., မှာ Alpine Group Singapore နှင့် AA Medical (Pacific-AA Group) တို့ပူးပေါင်းတည်ထောင်ထားသည့် ကုမ္ဗဏီတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ Alpine Group Singapore သည် Chevrolet နှင့် Opel ကားများကို စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ တစ်ဦးတည်းတင်သွင်းခွင့်ဖြင့် တင်သွင်းရောင်းချနေသော ကုမ္ဗဏီဖြစ်ပြီး Pacific-AA Group သည်မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆေးပစ္စည်းများနှင့် စက်ဆီချောဆီများ တင်သွင်းရောင်းချနေသော ကုမ္ဗဏီဖြစ်သည်။
GM သည်လည်းကောင်းတို့၏ ပထမဆုံး ကားအရောင်းပြခန်းကို ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် စတင်ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဟု သိရပါသည်။
အမရေိကနျနိုငျငံမှ General Motors သညျလညျး မွနျမာနိုငျငံ၏ စြေးကှကျထဲသို့ ဝငျရောကျရနျ ပွငျဆငျနပွေီဖွဈသညျဟု သိရပါသညျ။ General Motors သညျ Pacific Alpine Pte. Ltd., နှငျ့ပူးပေါငျး၍ မွနျမာနိုငျငံတှငျ Chevrolet ကားမြား ဖွနျ့ခြီရောငျးခခြွငျးနှငျ့ ပွုပွငျထိနျးသိမျးသညျ့ ဝနျဆောငျမှုမြားပေးမညျဖွဈသညျ။ ကမ်ဘာတဝနျးရှိ GM ၏ကားထုတျလုပျသညျ့ စကျရုံမြားမှ ထုတျလုပျသညျ့ ကားမြားအနကျ မွနျမာနိုငျငံနှငျ့ ကိုကျညီမညျ့ ကားမြားအမြိုးအစားမြားကို တငျသှငျးရောငျးခသြှားမညျဟုသိရသညျ။
ယခုအခြိနျဟာ အခြိနျကောငျးပါပဲ။ ကြှနျတျောတို့မှာ အငျမတနျ ကောငျးမှနျတဲ့ ကားအမြိုးအစား အမြားကွီးရှိပါတယျ။ လုပျငနျးသုံး Truck ကားတှေ၊ SUV တှကေစလို့ ဖကျရှငျကတြဲ့ ကားအလှတှအေထိ အကုနျရှိပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ Chevrolet မှ အဆငျ့အတနျးမွငျ့ ကှာလတီကောငျးတဲ့ ထုတျကုနျတှနေဲ့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ အမှတျတံဆိပျနာမညျကို ခိုငျမာအောငျ တညျဆောကျသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဟု GM Southeast Asia Operations မှ President ဖွဈသူ Martin Apfel မှပွောကွားခဲ့ပါသညျ။
GM နှငျ့ အကြိုးတူပူးပေါငျးမညျ့ Pacific Alpine Pte. Ltd., မှာ Alpine Group Singapore နှငျ့ AA Medical (Pacific-AA Group) တို့ပူးပေါငျးတညျထောငျထားသညျ့ ကုမ်ဗဏီတဈခု ဖွဈပါသညျ။ Alpine Group Singapore သညျ Chevrolet နှငျ့ Opel ကားမြားကို စငျကာပူနိုငျငံသို့ တဈဦးတညျးတငျသှငျးခှငျ့ဖွငျ့ တငျသှငျးရောငျးခနြသေော ကုမ်ဗဏီဖွဈပွီး Pacific-AA Group သညျမွနျမာနိုငျငံတှငျ ဆေးပစ်စညျးမြားနှငျ့ စကျဆီခြောဆီမြား တငျသှငျးရောငျးခနြသေော ကုမ်ဗဏီဖွဈသညျ။
GM သညျလညျးကောငျးတို့၏ ပထမဆုံး ကားအရောငျးပွခနျးကို ယခုနှဈကုနျပိုငျးတှငျ စတငျဖှငျ့လှဈသှားမညျဟု သိရပါသညျ။
Posted at: 09-07-2013 10:39 AM